Iikhrimu zokudambisa amadoda: izibonelelo, iingcebiso kunye neyona nto ibalaseleyo | Amadoda aQinisekileyo
Iikhrimu zokuhambisa isidumbu ziphakathi kwezinto onokukhetha kuzo ekufuneka uziqwalasele ukuba uyafuna ukulahla ezinye okanye zonke iinwele zomzimba wakho. Eminye yi-wax, i-razor, i-shavers shavers, kunye nokususwa kweenwele ze-laser.
Ukusebenza kwayo kulula kwaye banoluhlu lwezibonelelo kuzo zonke ezinye iindlela, nangona bengenazo iziphumo ebezingalindelekanga ezinokubakho (ukucaphuka, iinwele ezingenayo ...) okanye izilumkiso xa uzisebenzisa. Fumanisa ukuba ziyintoni na kwaye zeziphi izithambiso zamadoda ezingcono:
1 Zisebenza njani?
3 Ukuthintela kunye neengcebiso
4 Ezona zixhobo zokuthambisa zingcono
Ukusebenza kwezithambiso zokuthambisa kusekwe Izinto ezifakwe kwifomula yazo ezinyibilikisa ishafti. Kuba ziyimichiza, kwaye abanye abantu banovakalelo ngakumbi kwezi zithako, ngaphambi kokuyisebenzisa emzimbeni uphela, licebo elihle ukulivavanya kwicandelo elincinci lomzimba kuqala. Injongo kukujonga ukuba ngaba kukho naluphi na uhlobo lwempendulo engalunganga eyenzekayo.
Emva kwesicelo kufuneka ulinde i-cream ye-depilatory ukuba isebenze. Ixesha lingahluka ngokuxhomekeke kumenzi. Okokugqibela, kuya kufuneka uqhubeke nokucoca ukhilimu ngokuthe ngqo emzimbeni kwaye kunjalo. Iinwele zihlala kwikrimu, zikhokelela kwindawo enesiphene.
Abantu abaninzi bacebisa ngokuchasene nokusetyenziswa kwezithambiso Ngenxa yeekhemikhali ezinyibilikisa iinwele. Ukuba ukhetha ukususwa kweenwele zendalo, kwaye ungakhathali ukuba kufuneka utyale ixesha elininzi, jonga ezinye iindlela ezinje ngesitshetshe okanye isichebe somzimba.
Ukuba ujonga ukususwa kweenwele ngokukhawuleza kwaye kungenazintlungu, le yimveliso yakho. Xa kuthelekiswa nomthwebeba, i-khrimu yokufafaza ithambekele ekukhawulezeni kwaye ngokucacileyo icace kabuhlungu. Inyaniso, yinkqubo engenabuhlungu kwaphela. Ukususwa kweenwele zeLaser kunale nto inye, kodwa iikhrimu zifikeleleka ngakumbi (ubuncinci kwixesha elifutshane).
Ukusetyenziswa kwayo kulula kakhulu. Akunyanzelekanga ukuba ube yingcali yokuziqhelanisa nokuhambisa cream. Faka nje ukhilimu kwindawo oyifunayo okanye kwiindawo kwaye ulinde imizuzu embalwa ukuba isebenze. Kamva imveliso isuswa ngokulula phantsi kweshawa okanye nge spatula.
Yindlela esebenzayo. Ayisusi i-100% yeenwele, kodwa ukuba ifakwe ngokuchanekileyo inokusondela kakhulu. Kukho intetho yeepesenti ze-90 okanye i-95% Kuxhomekeke kumenzi.
Ukuthintela kunye neengcebiso
Ukuthobela imiyalelo kubaluleke kakhulu xa kuziwa ekusebenziseni ngokuchanekileyo nayiphi na imveliso, kwaye oku akunjalo. Kungoko kuphela apho unokufumana okuninzi kwaye uyisebenzise ngokukhuselekileyo. Iinkcukacha zemiyalelo ngamacandelo athile e-depilatory cream eyenzelwe. Oku kubalulekile kuba ezinye zinokusetyenziswa kwiindawo ezibuthathaka, ngelixa ezinye zingenakho.
Zonke iindawo azidingi isixa semveliso. Apho kukho uxinano olusezantsi lweenwele, umaleko obhityileyo wanele, ngelixa apho kukho ubungqongqo obuninzi beenwele kunyanzelekile ukuba kwenziwe umaleko otyebileyo. Esi sicwangciso siya kukuvumela ukuba ugcine imveliso kwaye wandise ukusebenza kokususwa kweenwele.
Ixesha lolunye uphawu lomenzi ekufuneka ethathelwe ingqalelo. Beka i-chronograph yakho kwizixhobo kwaye ungashiyi ikrimu ixesha elide kunokuba kubekiwe. Ukulahleka kunokubangela nantoni na ukusuka ekucaphukeni kolusu kukutsha kwemichiza kwimeko embi. Ukuba ukhetha ukuyidlala ikhuselekile, ngakumbi okokuqala xa usebenzisa imveliso ethile, licebo elihle ukuyishiya ixesha elingaphantsi kwelo lichaziweyo.
Ezinye iinwele zihlala zingahluthwanga emva kokususa ukhilimu. Yinto eqhelekileyo leyo. Kwimeko apho kungcono ukuba ungaphinde ufake i-cream ngokukhawuleza, kodwa ulinde kude kube ngumhla olandelayo. Ukuba zi-flashy kakhulu, cinga ngokuzikroba nge-tweezers okanye usebenze nge-razor.
Ezona zixhobo zokuthambisa zingcono
I-Nair Remover yeCream yeCream es kunokwenzeka ikrimu yokususa iinwele ekumgangatho ophezulu yamadoda. Ngokungafaniyo nezinye iimveliso, iNair ibandakanya iplunger esebenzayo. Ukongeza, yenzelwe ishawa: faka ulusu olomileyo kwaye ulinde ubuncinci umzuzu ngaphambi kokuba ungene kwisitya. Emva koko, kuya kufuneka uhlambe njengoko uqhele ukwenza (ukugcina iindawo apho i-cream isetyenziswe khona kude namanzi ngqo) kwaye uyisuse imveliso emva kwemizuzu emi-2 ukuya ku-10 kuxhomekeke kubuninzi beenwele.
I-Veet yenye yezona zinto zithandwa kakhulu ekususeni iinwele. Kwaye ineemveliso ezenziwe ngokukodwa emadodeni. Olona khetho lomeleleyo lolakho I-cream yokuhambisa ulusu olubuthathaka. Phakathi koluhlu olubanzi lwezinto zokuthambisa zamadoda sikwafumana ukutshiza izimvo ezininzi ezintle.
Yenziwe kwiphakheji emnyama emnyama, UCollistar yenye into yokuthambisa kwamadoda. Kuyabonakala ukuba yi ukhilimu ofanelekileyo kwindawo esondeleyoUkusetyenziswa phantse bonke abavelisi ekucebiseni ngokuchasene nako. Olunye uphawu ekufuneka ulugcinile engqondweni ukuba uthathe isigqibo sokuqhelisela i-creaming waxing EzikaNad. Njengangaphambili, yenzelwe ngokukodwa ulusu kunye neenwele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Zokuthambisa » Izithambiso zokunyanzelwa kwamadoda